ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက? - Yangon Media Group
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက?
ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာပြည်အခြေစိုက် ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် ကိုသက်ဦးမောင်(ခ) ဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး(ခ)မိုးအောင်တို့သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ညပိုင်းက အ မှတ်(၃)လမ်းမကြီးအတိုင်း လမ်း လျှောက်လာစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မသင်္ကာသဖြင့် ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရာ ရခိုင် ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်နယ် မြေလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ၊ စာရွက်စာတမ်း အမှတ်အသားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာမိတ္တူအချို့တွေ့ရှိခဲ့ ခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာကောင်စီထံမှသိရသည်။
ယင်းသို့တွေ့ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှတ်(၈) လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက တရားလိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထောက်ကြန့်နယ်မြေ ရဲစခန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ-၃ ဖြင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို အမှုဖွင့်ထား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာကောင်စီထံမှသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ”မနေ့က ညက သတင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ သတင်းမေးဖို့အတွက်ချိန်းဆိုပြီး တော့ ထောက်ကြန့်ကို သွားကြတာ။ ရဲဘက်ကတချို့ပြောဆိုချက် အရတော့ လမ်းမှာမသင်္ကာလို့ စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရဲအစီရင်ခံစာတချို့နဲ့ စာရွက်စာတမ်းတချို့တွေ့ရှိတယ် ဆိုပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ- ၃ နဲ့ လက်ရှိမှာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာပေါ့”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်ပြောသည်။ ‘လက်ရှိမှာ သူတို့နဲ့အဆက် အသွယ်မရသေးဘူး။ သူတို့သတင်း ဌာနကပဲ အဆက်အသွယ်လုပ် နေတယ်။ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူတို့သတင်းဌာနတွေက လိုက်လံလုပ် ဆောင်နေတယ်။ အမှုဖွင့်တာနဲ့ ဖမ်းတာက ထောက်ကြန့်နယ်မြေ ရဲစခန်းကလို့သိရတယ်။ အခုချိန်မှာအဲဒီမှာရှိလား၊ မရှိဘူးဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးဘူး”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင် ပြည်နယ်၊ မောင်တော-ဘူးသီးတောင် ဒေသ၌ လုံခြုံရေးတာဝန်များ ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြန် လည်အနားပေးစုဖွဲ့လျက်ရှိသည့် လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ချဉ်းကပ်စည်းရုံးဆက်သွယ်ပြီး ရခိုင်ဒေသနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ တပ်ဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရေးကြီး လုံ ခြုံရေး စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကို ပြည်ပသတင်းဌာနများသို့ ပေးပို့ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တရားမဝင် သတင်းရယူဆောင် ရွက်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ သတင်း ထောက် ကိုဝလုံး(ခ)သက်ဦးမောင် မောင်နှင့် ကိုကျော်စိုးဦး(ခ) မိုး အောင်တို့ နှစ်ဦးအား သက်သေ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သဖြင့် ထောက်ကြန့် နယ်မြေရဲစခန်းမှ(ပ) ၁၂၉၈/၂ဝ၁၇၊ ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ-၃ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်းနှင့် လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူ ဒုတိယရဲမှူး မိုးရန်နိုင်နှင့် ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ခင် မောင်လင်းတို့နှစ်ဦးကိုလည်း ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေပုဒ်မအရလည်းကောင်း၊ ရဲစည်းကမ်းထိန်း သိမ်းရေးဥပဒေများအရလည်း ကောင်း ထိရောက်စွာအရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသတင်းဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကျောက်ကြီးမြို့နယ် နတ်သံကွင်းဈေး မီးလောင်၊ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁၅၉ ခန်း ဆုံးရှုံး